I-Katla Boutique studio e-City Centre - I-Airbnb
I-Katla Boutique studio e-City Centre
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Dagur Hunfjord
Itholakala ngaphakathi kwesifunda esimaphakathi se-101 Reykjavik. Eduze kwesikhungo sezivakashi nezitolo. Izindawo zokudlela kanye nempilo yasebusuku kuyibanga lokuhamba kodwa alisondele kakhulu ukuthi liphazamise ukulala kwakho. Itheku liqhele ngemizuzu emi-2 uma uthanda ukubuka imikhomo noma uhamba ngomkhumbi uye esiqhingini se-puffin. Amagumbi aklanywe kahle ukuze anikeze konke ukunethezeka nezinsiza ongayilindela ehhotela eliwubukhazikhazi. Ngakho-ke zilungiselele ukuzitika ngeshawa kanokusho futhi uzike emibhedeni yethu ethokomele. Siyakwamukela ku-No8 boutique apartments.
Indlu yesitudiyo esanda kulungiswa engu-25 sqm ngaphakathi kwale ndlu yendabuko yamapulangwe yase-Icelandic. Ihlalisa abantu abangafika kwabangu-2, njengamawele noma umbhede wabantu ababili, onekhishi, indawo yokuhlala kanye negumbi lokugeza.
- imicamelo nezingubo zokulala
- Ilineni likakotini laseGibhithe
- Amathawula okugeza amancane namakhulu
- Izinto zangasese ezitholakalayo
- Ibhodi loku-ayina noku-ayina
- Ifulethi lisesitezi sokuqala, kufanele kusetshenziswe izinyathelo futhi alikho ikheshi.
ubusuku obungu-7 e- Reykjavík
4.92 · 313 okushiwo abanye
Lesi situdiyo singaphakathi kwesifunda esimaphakathi se-101 Reykjavik. Itheku liqhele ngemizuzu emi-2 ukuze ubuke imikhomo noma uhambe ngomkhumbi uye ePuffin Island. Iseduze nesikhungo sezivakashi nezitolo. Izindawo zokudlela kanye nokuphila kwasebusuku kungaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo.
Ibungazwe ngu-Dagur Hunfjord
Sicela usithumelele umlayezo nge-Airbnb uma kukhona imibuzo